वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ? (भिडियो) – Nepal Press
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ? (भिडियो)
२०७८ वैशाख २६ गते १३:२४
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन सोमबार शुरू हुँदैछ ।
विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री ओलीले राख्ने प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेका छन् । जनता समाजावादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताइसकेको छ । नेकपा एमालेभित्रै पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुभन्दा राजीनामा दिन उपयुक्त हुने निष्कर्षमा माधव नेपाल पक्ष पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके के हुन्छ ? धेरैको चासोको विषय बनेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को १ बमोजिम विश्वासको मत लिन चाहनुको अर्थ ‘संसदले विश्वास दिए सरकार चलाउने नदिए नचलाउने’ भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके अर्को सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्न ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘विश्वासको मत फेल भयो भने सरकार स्वतः धारा ७७ को ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ । त्यसपछि कामचलाउ सरकारको कार्यकारीणी अधिकार सम्पूर्ण रूपमा विच्छेद हुन्छ । त्यसपछि कार्यकारिणी अधिकारयुक्त सरकार बनाउन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ’, ज्ञवालीको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए उल्लेखित ३ चरणको संवैधानिक प्रक्रियाबाट मुलुक अगाडि बढ्नेछ ।
#वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली
प्रकाशित: २०७८ वैशाख २६ गते १३:२४
One thought on “वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ? (भिडियो)”
ए वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यू ?
विश्वासको मत लिन नसके कसरी ७६(३) काे सरकारमा परिणत हुन्छ र कसरी ७६(३) काे सरकार काम चलाउ हुन्छ?
जे सुकै नबोलुम न विद्वान ।
कसलाइ लेखाएर लिनु भयाे पिएचडी ?
याे सरकार ७६(२) काे सरकार हाे । २७ गते विश्वासकाे मत लिन नसके केपीले राजिनामा दिनु पर्छ अनि ७६(३) काे सबै भन्दा ठुलाे दलकाे सरकार बन्छ । त्यो सरकारले १ महिना भित्र ७६(४) बमाेजिम विश्वासकाे मत लिनु पर्छ । विश्वासकाे मत लिनु अघि त्यो सरकार पुर्ण कार्यकारी सरकार हाे । बिश्वासकाे मत लिन नसके मात्र त्यो सरकार कामचलाउ हुन्छ । अनि ७६(५) बमाेजिम बहुमत पुर्याउने अवस्था देखाउन सक्नेको सरकार बन्छ ।